🥇 ▷ Kuwani waa sawirrada rasmiga ah ee OnePlus 7T oo ay soo bandhigtay shirkadda & # 039; s Maamulaha guud ✅
Kuwani waa sawirrada rasmiga ah ee OnePlus 7T oo ay soo bandhigtay shirkadda & # 039; s Maamulaha guud
Waxaan horey u ogayn in OnePlus 7T Waxay la imaan doontaa naqshad kaamirooyin gadaal wareegsan ah oo leh seddex dareemayaal iyo Flash flash, laakiin hadda waxaan u xaqiijin karnaa inay tahay rasmi rasmi mahadcelin Pete Lau, oo ah madaxa shirkadda soo saaraha Shiinaha, ayaa soosaaray sawirada la soo bandhigay ee moodelkan dhawaantan. wax uu ku sameeyay websaydhada ‘OnePlus community’.
Waxaa la yiri Qalabkani wuxuu lahaan doonaa muuqaal qurux badan oo la mid ah kuwii horey loogu arkay barnaamijka OnePlus 7 iyo 7 Pro, oo tanina waa wax aan sidoo kale dib u xaqiijinayno hadda, sifiican, haa, OnePlus 7T ayaa si habsami leh u sii haysa labadan marin, marka laga reebo mashiinka sawirka, dabcan.
Marka loo eego waxa aan ku arki karno labada muuqaal ee uu muujiyey fulinta, OnePlus 7T wuxuu la imanayaa guddi gadaal buluug ah oo umuuqda waxyar hoos udhac mugdi iyo nuur ilaa sare ilaa hoose. Waxaa cad in sumadda shirkaddu ku taal, wax yar oo ka hooseeya nidaamka kamaradaha saddex-geeska ah ee lagu dhejiyay guryaha wareega ah.
Qoraalka u adeegsaday astaan ​​u ah sawirrada, Pete Lau wuxuu khudbadiisa ku bilaabayaa isagoo leh:
“Ehelladeenii ugu horreeyay waxay xasuusan karaan bilawga OnePlus One sanadkii 2014, markii aan dunida la wadaagi jirnay markii ugu horeysay. Waxaan ku qaadnay daqiiqad kaliya inaan kahadalno faahfaahinta iyo waxqabadka, iyadoo munaasabada inteeda kale ay ka go’an tahay qaabeynta iyo khibradda adeegsadaha. Tani waxay ahayd mid aan caadi ahayn. Waqtigaas, nashqadeynta badanaa waxay ahayd wax soosaaritaan halkii ay ahaan lahayd qaab, gaar ahaan adduunka taleefanka casriga ah ee Android. Waxaan ka dhignay diiradda. Waxaan rabnay inaan wax badalno. ”
Ka dib wuxuu sii waday ka hadalka mawduuca astaanta iyo muhiimadda ay u leedahay naqshad wanaagsan mid kasta oo ka mid ah taleefannadeeda, iyo sidoo kale horumarka ay ku soo qaateen tan iyo dhinacyo kale. Wuxuu sheegay in isaga iyo OnePlus labadaba ay diiradda saareen in ay yiraahdaan “wax dheeri ah” dhammaan aaladooda si ay u bixiyaan Terminalyo aad u fiican oo la kulmaya heerarka sare ee shirkadda.